Qaabka Layaabka Leh Ee Xafiiska Maaliyada Alshabaab U Shaqeeyo Iyo Sida Ay Cashuuraha Uga Qaadaan Ganacsatada Soomaalida | Berberatoday.com
Qaabka Layaabka Leh Ee Xafiiska Maaliyada Alshabaab U Shaqeeyo Iyo Sida Ay Cashuuraha Uga Qaadaan Ganacsatada Soomaalida
Muqdisho(Berberatoday.com)-Kooxda Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya ka dagaalanta waxa ay leedahay laba waaxood oo dadka shacabka ah uga soo ururiya cashuuraha, sida lagu sheegay daraasad cusub oo dhawaan la soo saaray. Waax waxaa la yidhaahdaa Zakawaat, midka kalena Waaxda Maaliyadda.
Waaxda Zakawaat-ka waxa ay soo ururisaa waxyaabaha aan lacagta ahayn ee Shabaab ay dadka ka qaaddo, sida xoolaha iyo dalagyada beeraha kasoo go’a, halka Xafiiska Maaliyadda uu ururiyo lacagta canshuurta ah.
Xafiiska maaliyaddu waxa uu uruuriyaa lacagta cashuuraha oo ay ku jiraan Zakawaat-ka oo lagu qaado cadad dhan 2.5% oo ku jaan go’an qiimaha ganacsiga oo ay qiimeyso Al-Shabaab ka hor macaashka. Tani waxa ay baal marsan tahay sharciga Islaam-ka oo ogolaanaya in Zakada lagu bixiyo boqolleey dhammaadka sannad dhaqaaleed walba, waxaa laga jarayaa raasamaalka oo dhan.
Tani waxa ay horseedday in xubnaha kooxda Al-Shabaab dalbadaan in mushaarkooda laga bixiyo Zakada halkii ay ku qaadan lahaayeen canshuuraha uu soo uruuriyo xafiiska maaliyaddu.
Al-Shabaab waxa ay haystaan liiska mulkiileyaasha ganacsiga iyaga oo qiimeeya qiimohooda. Dhammaadka sanadka, dhammaan ganacsiga waxaa laga doonayaa in ay bixiyaan Zakada sanad laha ah iyaga oo kaash ahaan ugu geeynaya xafiiska maaliyadda. Dhaqankan waxa uu ka hirgalaa xataa deegaanada aysan Shabaab-ku joogin: Suuqa Bakaaraha ee Muqdisho, milkiileyaasha ganacsiga waxaa ku hareereysan mas’uuliyiinta maaliyadda ee Al-Shabaab, deegaanada ay Shabaab maamulaan Zakada kaash ayey ku dhiibaan.
Maalmihii ugu dambeeyey waxa dalkaasi Soomaaliya si weyn looga hadal hayay xaflad ay dad masaakiin ah sakooyin ugu qaybisay xarakada Alshabaab taasi oo ay ku qabsadeen badhtamaha Xamar.